दुई कम्पनीको साधारण सभा आज, यस्ता छन् एजेण्डा ? - नेपालबहस
दुई कम्पनीको साधारण सभा आज, यस्ता छन् एजेण्डा ?
| ९:०४:५८ मा प्रकाशित
२३ जेठ, काठमाडौं । आज दुई कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा गर्दैछन् । नाडेप लघुवित्त र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारण सभा गर्न लागेका हुन् ।
नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले जेठ ७ गते स्थगित गरेको छैठौ वार्षिक साधारण सभा आज जेठ २३ गतेको लागि तय गरेको हो । रानीबन पार्टी प्यालेस एण्ड रेष्टुरेण्ट नागार्जुन, काठमाडौंमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान ११ बजे सभा गर्ने तयारी कम्पनीको छ ।
त्यस्तै, आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव सहित सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले तेस्रो वार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय कमलादी, काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सभा आव्हान गरिएको हो ।
कोभिड महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सानिमा लाईफले पनि सभा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने तयारी गरेको छ । आईपीओ पस्ताव सहित आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गर्दै सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण समेत गर्नेछ ।
साथै सञ्चालन समितिको सदस्यहरुको बैठक भक्ता तथा अन्य सुविधाहरुको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि सभाका लागि तय भएको छ ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले बोलायो असार २३ गते साधारणसभा ५ दिन पहिले
लाभांश पारित गर्न लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ? १ महिना पहिले
ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकमा दुई जना सञ्चालक निर्वाचित २ महिना पहिले
स्वावलम्बन लघुवित्तको साधारण सभा आज, २० प्रतिशत लाभांश पारित गर्दै ३ महिना पहिले
४० प्रतिशत नगद पारित गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आव्हान गर्‍यो साधारण सभा ४ महिना पहिले
सिन्धु विकास बैंकले डाक्यो चैत ९ गते साधारण सभा ४ महिना पहिले
नेप्सेमा १२ करोड ५० लाख इकाई सूचीकृत १० घण्टा पहिले
नेपाल बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै १ दिन पहिले
क्षति न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तु मैत्री संरचना निर्माणमा जोड ४ दिन पहिले
पानीजहाजको सब स्टेशन निर्माणस्थल निरीक्षण २ दिन पहिले
सत्ताधारी दल नेकपा एमाले ढिलो छिटो एकीकृत हुने, विपक्षी गठबन्धन संकटमा ४ दिन पहिले
कोरोनाको गम्भिर लक्षण देखिदा समेत संक्रमित घरमै बस्दा मृत्युदर बढ्यो ३ हप्ता पहिले
सम्पति शुद्धीकरणः पशुपति विकास कोषका एक सञ्चालकको कुल सम्पति १ अर्ब २५ करोड भेटियो ४ हप्ता पहिले
प्रभु सेलक्ट फण्डको इकाईका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन ४ हप्ता पहिले
चन्द्रागिरिमा पर्खाल भत्कँदा २ को मृत्यु, अन्य २ घाइते ३ हप्ता पहिले
ओलीले संविधान भत्काउन चाहेको युवा नेता थापाकाे आरोप ३ महिना पहिले
ओली र नेपालबीच आज भेटवार्ता हुँदै १ महिना पहिले
भक्तजनबाट बसाहा गुफा अवलोकन ६ महिना पहिले
न्यूनतम् १० कित्ता शेयर आवेदन गर्न सकिने २ वर्ष पहिले